Wararkii Ugu Danbeeyey Nabadeynta Dagaalkii Baladweyn. – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Shir ay isgu yimaadeen Magaaalada Muqdisho Hogaanka dhaqanka Beelihii ku Dagaalamay Baladweyne ayaa isla gaaray Hishiish Xabad Joojin ah,waxaana lagu Ballamay in Odayaasha iyo Dadka ay talada ka go’do in ay tagaan Magaalada Baladweyne.
Odayasha ku shiray Muqdisho ayaa ku guuleystay in Xabadjoojintii ay ku dhawaaqeen in ay dhaqan Gashay,Maleeshiyaadkana lagu wado in lakala qaado,si buuxdna loo soo celiyo Nabaddii iyo dhaqdhaqaaqii Nolosha.
Shalay Baladweyne waxaa tagay Wefdi Wasiirada Dowladda Federaalka iyo Madaxweynaha Maamulka Galmudug,waxa ayna soo Jeediyeen In Ciidamo lakala dhexdhigo Maleeshiyadka iska Hor fadhiya,waxa ayna saakay U balansanyihiin qabashada shaqadaas inkastoo Howshasi ay gaar u tahay,mana la socdaan Hogaanka ugu sareeyo Dhaqanka Beelihii ku Dagaalamay Baladweyne.
Wefdigii shalay taagay Baladweyne ayaa waxa ay xalay ku Hoydeen Xerada Ciidamada Amisom ay ku leeyihiin Duleedka Baladweyne,waxaan si gaar ah Amaankooda u ilaalinaayey Ciidamada Jabuuti ee Qeybta ka ah Amisom
Previous: Dagaal Culus oo xiligan ka soconaya qeybo kamid ah Magaalada Baladweyne
Next: Shirka Madasha wada tashiga Qaranka oo Go’amo laga soo saarayo Maanta